Iindaba -Ulwahlulo loMbutho weCardigan.
Ikwabizwa ngokuba ngumbutho wenqanaba le-weft, umbutho ohlangothini olunye. Ukulungiswa kwenaliti: ijezi yokuluka eneenaliti ezizeleyo kwibhedi enye yenaliti. Ilaphu linolwakhiwo olukhulu olunqamlezileyo kunye neepropati zokwenza curling, kwaye kulula ukuwa emva kokuba iluphu yaphukile.
Ikwabizwa ngokuba lilaphu lombambo, ikudidi olufanayo nolunye u-1 + 1 ubambo kunye no-2 + 2 ubambo. Ukunitha kuqhutywa ebhedini yenaliti ephindwe kabini, bonke oonxantathu bangena emsebenzini, kwaye ubunzulu beluphu bufana. Amalungiselelo ukunitha: ngaphambili kunye nangemva inaliti iibhedi zilungiswe kunye ngemithungo ngokupheleleyo.
Ikwabizwa ngokuba ngumbambo omnye. Faka isicelo kwi-neckline, cuffs kunye nehem.
Inomgangatho ophakamileyo wokunaba kwe-lateral kunye ne-elasticity, isiqingatha sokwandiswa siphindwe kabini kunaleyo yamalaphu alukiweyo.
Umbutho we-Idling Idling
Ikwabizwa ngokuba sisakhiwo sophahla lomoya, sisakhiwo esidityanisiweyo sesakhiwo esineembambo kunye nenaliti yesakhiwo senaliti. Iimpawu: Ukuthungwa okuthe tyaba ngaphambili nangasemva kumacala akuqhagamshelekanga, kwimeko engaphezulu, kuthe kratya kunethambo lethambo, ngokugcina ukufudumala okuhle, ukwandiswa okuthe ngcembe, kunye nemilo ezinzileyo.
Umbutho weTuck Circle
Ilaphu elifakiweyo elinebhedi enye yenaliti, ekwabizwa ngokuba yintyatyambo yeflethi yenaliti. I-tuck inokwenza iintlobo zeempembelelo zepateni ezinje ngeepateni zemesh, iipateni ezingalinganiyo, kunye neepateni ezimibalabala. Ngenxa yobukho beeluphu ezinde, amandla elaphu aya kuchaphazeleka kwaye kulula ukuba kwandiswe emacaleni.
Umbutho weentyatyambo weFat
Umbutho weentyatyambo zeFat ligama eliqhelekileyo lombutho weJihua. Ngokwe-overhang eyenziwe yi-tuck, umphezulu wenza iphatheni ye-convex, njl njl., Kukho icala elinye kunye necala elinamacala amabini; kukho umqolo omnye kunye noluhlu oluninzi; kukho inaliti enye kunye neninzi yenaliti.
Igama lezenzululwazi lolwakhiwo olugqwethekileyo lubizwa ngokuba lulwakhiwo olunamakhonkco. Ngokuhambisa ibhedi yenaliti, imithungo idityanisiwe ebhedini yenaliti ephindwe kabini.
-Izicubu ezibini zokulinganisa iintlanzi
Iithishu zokulinganisa iintlanzi eziphindiweyo zikwabizwa ngokuba ziicubu ezingaluki, kwaye ikwabizwa ngokuba yinaliti yuanbao kabini. Inithiwe okhulelweyo ebhedini yenaliti, kwaye ubungakanani bayo bubunxa kabini. Amanqaku: Ilaphu intlanzi isikali ilaphu kulula ukuba zide kwaye zikhubazeke kwicala ezinqamlezayo, nto leyo kunciphisa ukugcinwa imilo lempahla, kodwa ukugcinwa imfudumalo kuyaphuculwa, kwaye eli laphu unentabalala kunye imvakalelo elingqingqwa. Isetyenziswa ngokubanzi inaliti ukunitha.
I-jacquard weave luhlobo lokuluka olukhetha umsonto eluhambeni kwaye lwenze ii-loops kwithuba elithile ngokweemfuno zepateni. Xa umsonto ungatshixwanga, uhlala ujikeleza ngasemva kwilaphu kwaye unokudityaniswa kwibhedi enye yenaliti. . Iimpawu: Ilaphu ziyatyeba, akukho lula ukuba zikhubazeke, extensibility zidityaniswe kunye dispersibility ngaphantsi, kwaye ifuthe umbala elungileyo.
Umbutho weentyatyambo ongenanto
Igama lezenzululwazi lesakhiwo seentyatyambo esingenanto sisakhiwo se-leno, esikwabizwa ngokuba sisakhiwo seentyatyambo sepesika, esinokulukwa kwibhedi enye yenaliti. Iinaliti zokunitha zicwangciswe ngokupheleleyo, kunye nejezi enye njengesakhiwo esisisiseko, kwaye imithungo idluliselwe ngokomfuziselo. Isetyenziswa ngokubanzi kwiipateni zokumisa ibha.